Maku Jahwareersantahay Lamaanahaaga In Uu Ku Jecelyahay Iyo Inkale? | Arimaha Bulshada
May 21, 2008 at 10:40 am | Posted in Sheeko | Leave a comment
(Hurdada Ka Kac Kalana Garo Hadda)
hadaba shaki kuma jiro in qof walba uu kala garan karo qofka jecel iyo kaan jecleyn, kan daneynaya iyo kan aan daneyneyn, wixii u fiican iyo wixii u daran, iyadoo taasi ay jirto hadana dad badan baa ku jahwareersan kala garashad in lamaanahooda si dhab ah u jecel yahay iyo in kale taasina waxay ku noqotaa su,aal maankooda ku soo laalaabata had iyo jeer jahwareer badanna ku keenta.
maalmahan dambe waa xaqiiq in baahida ugu weyn ee dhalinta maanta tahay in ay ogaadaan in jacaylkooda uu daacad u yahay iyo in kale.
waxaad arkeysaa qof ku weydiinaya su,aalo arrintaas ku aadan, kuna leh run ahaantii makala garanayo gabadhaasi in ay i jeceshahay iyo in kale, wiilkaas in uu i rabo iyo in kale, taas waa shakiga ugu badan ee maankooda ka guuxaya dhalinteenna maanta.
leyskuma heysto in qof walbaahi ogyahay qofka kale in uu jecel yahay iyo in kale, laakiin waxaa jira dulqaad xad dhaaf ah oo qofka wax jecel ku beerma xiliga uu wax jecelyahay isaga isla markaana aan si wanaagsan loola wadin doonta caashaqa.
qofkaasi wax jecel wuu ogyahay in qofka uu jecelyahay ka meermeerayo laakiin, dulqaad buu muujiyaa illeyn dabin buu ku jiraaye kaas ma awoodo badanaa in uu ka leexdo qofkaasi isagoo og in aan loo soo jeedin.
hadaba dulqaadka noocaas ah ee la iska daba rido qof aan kuu soo jeedin ma yeesho micno buxa kumana dhisna caqliga iyo dadnimada qofka, sababtoo ah bacaad baad qoor sagaaro ku heysaa amaba hal baad bacaad ku liseysaa, sow maaha marka doqonnimo aadan dareensaneyn.
si aad uga fogaato arrimahaas, si aad u kala garato in lamaanahaaga si dhab ah kuu jecel yahay sameey baaritaan dheer, isku day in aad ka sla gaarto qofkaasi dabeecadihiisa, maku jecel yahay mise been buu kugu wadaa, taasi waxaad u mari kartaa wadiiqooyin fud fudud balse marka hore bal eeg sifooyinka lagu garto qofka ku jecel iyo kan kale.
marka hore qofkan jacayl baad isugu baaqdeen, waad is jamateen ka dib waxaa bilowday jacaylkii iyo in la wada kulmo iyo in la is weydaarsado weero jacayl.
adiga kaba soo qaad jacaylku dhab buu kaa yahay , qofkaana markii hore xiiso bey ka ahayd taas waxaa kuu cadyn kara labo arrin oo waaweyn:
(1)kulankiinii joogtada ahaa oo uu ka meermeero
(2)cudur daar joogto ah
labadaas arimood waxay saldhig u yihiin kala garashada qofkaasi in uu ku jecel yahay iyo in kale, waana wax jira oo dad badan ku baraarugsan yihiin.
waxaa yaraanaya kulamadiinii badnaa maalinba maalinta ka dambeysa ileyn qof aadan dan ka lahayn niyadu ma rabtee qofkaasi si aadan u eedeyn cudur daar iyo hooyaa xanuunsaneyn, adeer baa sidaan ahaa iyo waxyaabo aan jirin buu kuula imaanayaa.
sow is weydiin meysid , markuu ku jeclaa ee si joogto ah aad u wada kulmi jirteen , halkee bey jireen hooyo iyo adeer ma haday soo baxeen, maya ee waa marmarsiyo geed loogu soo gabadaa jirin.
wuxuu qofkaasi dhibsanayaa soo wicitaanka badan ee uu ku soo wici jiray amaba aad adiga wici jirtay, wuxuu yareynayaa xiriirkii uu kula soo sameyn jiray, wuxu la soo baxayaa dabeecad aadan horay uga baran, wuxuu diidayaa codsigaad u soo bandhigto, wuxuu diidayaa in u barto ehelkaaga, qaraabadaada , asxaabtaada iyo qof walboo adiga ku yaqaanna.
markii uu yaraado xiriirkiinna , ogow taasi in ay calaamad u tahay jacayl xiiso ku dhisan.
qofka ku jecelna maxaad ku garan kartaa?
wax badan oo badan, alleylehe isku mid maaha, marka hore ogow qofka ku jecel naftiisa in uu kaa jecel yahay.
(1)dantaada ayuu ka hormariyaa tiisa.
(2)wuxuu ku siiyaa naxariis badan iyo xanaaneyn.
(3)hadallo jilicsan oo macaan ayuu kugu yiraahdaa mar walba.
(4)mar walba wuu kula soo xiriiraa marnaba kaama baaqdo.
(5)mashquul walba oo uu yahay kama maqnaatid xusuustiisa.
(6)maalin walba wuxuu jecel yahay in aad is aragtaan oo aad kulantaan.
(7)haduu gaari cusub lacalla maanta soo iibsado oo uu kuu dhiibo si aad magaalada ugu tagto, hadaad gaariga shil la gasho oo uu burburo adna ka badbaado lacalla markaad u sheegto erayga ugu horeeyo ee uu ku leeyahay waa:
“Oh! Gacaliso\_Gacaliye adiga un ma ii badbaaday”
(8)mar walba wuxuu daneeyaa, la joogitaankaaga.
(9)magacaaga iyo hadal heyntaada ayuu afka ku hayaa xilli walba.
(10)mar walboo aad kulantaan wuxuu kugu yiraahdaa erayo ay ka mid yihiin:
“adiga ayaan ifka kuugu jecelahay, marna kaama maarmo, waxaad tahay qofka keliya ee aan ifka ka eeganaayay, nafta kaama maaranto, hurdada kaama seexo oo mar walba xusuusteysa ayaad dhex mirataa iyo erayo kaloo la mid ah”.
dadku waxay badanaa yiraahdaan , arintaas waxaan u sameyn waayay waan mashquulsanaa oo waxaas baa i qabsaday, laakiin qof si dhab ah kuu jecel marnaba lagama yaabo dan kaleba in uu kaa hormariyo mar walba adigaa ugu horeeya wuxuu wax u qabto.
intaas iyo in ka badan waxaad ku kala garan kartaa jacaylka dhabta ah.
sifooyinkaasi markaad u kuur gasho, isla markaana dhuuxdo waxaa kuu kala cadaaneysa in qofkaasi uu si dhab ah kuu jecelyahay iyo in kale, waxaadse ogaataa in haduusan lamaanahaaga sifooyinkaas lahayn in uusan ku jecleyn.
waxaa jirka mararka qaar adoo ogsoon in uusan lamaanahaaga jacaylka dhab ka ahayn hadana aad iska dhaadhiciso in adiga aad dan leedahay oo aad jeceshaya sidaa daraadeed ay qasab kugu tahay in aad u dulqaadato, ma xuma dulqaadka laakiin adiga qudhaada ku xisaabtan in qof aad hadaba u jeedo in uusan ku jecleyn markaad is raacsiiso aad ka shalaayi doonto.
hadaba hadii aad daneyneyso in naftaada aadan u ogolaan in lagu gardaroodo laguna xad gudbo, isku day in aad kala garato sir iyo caad iskana xil saar sidii aad u ehli lahayd qof aad si dhab ah isku jeceshihiin.
ugu horeyn hadii aad ogaato in lamaanahaaga uusan lahayn sifooyinkaasi lagu garta jacaylka dhabta ah, la hadal una sheeg jacaylka in uusan ka ahayn mid dhab ah kana codso in uusan ku lugoyn kuuna kala cadeeyo in uu doonayo in xiriirkiinna sii socdo iyo in kale markaas adigoo awalba dareen qabay ogaana in uusan si dhab ah kuu jecleyn ayaad go,aan buuxa ku gaareysaa in aad kala saarto kana baxdo xeyndaabka qiyaanadiisa.
qofkaas haduuba rajo kaa leeyahay dabcan wuxuu kuu keenayaa marmarsiyo iyo waxaad sheegeyso in aysan run ahayn, hadana haku deg degin ee ka aqabal waxaa dhici karta in uu iska badalo dabeecadaasi uuna kuu soo jeesto.
haduu ku soo jeesto oo aad ka hesho jacayl dhab ah , waa sidii loo baahnaa laakiin hadii uusan wax dan ah kaa lahayn sidiisii hore kuuma dhaamayo markaasi maxaa dhibanow kula gudboon?
isagoo dhuuxa iyo dhiigga kaaga maran, oo aad sinnaba uga maarmi karin ayaad ku kacaysaa fal hadhow faa,iido kuu noqon kara kaasoo ah in aad ka gaarto go,aan aad niyadaada uga jareyso isaga.
waan ogahay dad badan in ay taas la yaabi doonaan oo aysan mari doonin dhuuntooda , horay ayuu fanaan u yiri:
dadkaa i leh isaga leexo ee
ila yaaban ani
waa xaqiiqo qofka wax jecel ee aan loo soo jeedin inta uu la laamadoodayo jacaylka aan lala wadin uusan waalid iyo asxaab ka maqleynin waano, iyo in uu is daba qabto kana haro qofkaasi aan rabin.
suugaan ayaa leh:
sida waqal daruureed ahee
mid kalaa leh:
wadar iila taliyaan
adigaa i wiiqee
wiish bey la sara tegay
wadadiina ka ambaday
sida weel dalooshaday
biyo looga waabiyaa
waanadu i dhaaftaa
wey badan yihiin run ahaantii oo halkan laguma soo koobi karo heesaha ka tarjumaya qofka aan jacaylkiisa loo soo jeedin ee marka laga waaniyo in uu ka haro qofkaasi aan yeeleyn , laakiin run ahaantii waa go,aan wanaagsan dunidana ka waayi meysid qof kaaga fiicnaada qofkaas aan ku jecleyn ee aad iska daba rideyso.
waxaa haboon in aad ogaato in shaarftaada iyo dadnimadaadaba aysan ku jirin in aad adiga un noqoto mar walba kan wax jecel, wax daneeya mar walbana laga gacan sareeyo ee lagu wiirsado, isku day in aad naftaada xoreyso kana bari yeehso qofkaas aan kaaga diir naxaynin dhibta jacayl ee uu kuu horseeday.
hadii aad xitaa dhibaato ka qabto amaba ka walwaleyso qaabka aad isku ilowsiin lahayd qofkaas aad jeceshahay mar wadooyinkaan:
(1)marka hore jooji kulanka aad la kulmi jirtay qofkaasi
(2)dhamaanba jar xiriirada aad la sameyn jirtay
(3)hadii aad aadi jirtay guryaha ka ag dhow xaafadiisa ha aadin oo haka ag dhowaan
(4)hadii aad ka heysay sawirro amaba warqaao ama wax walboo xusuustiisa kugu abuuri kara burburi oo halna ha reeban
(5)hadii ay lagama maarmaan tahay in aad mar walba is aragtaan sida in aad iskuul wada dhigataan iyo in aad meel kawada shaqeysaan iska ilaali in aad badsato fiirintiisa oo iska indho tir iskana dhig sidii aadan u jeedin.
(6)is mashquul mar walba marnaba ha u ogolaan naftaada in ay seken xusuusato .
(7)baro saaxiibo cusub iskuna day in aad mar walba la xirato saaxiibadaas cusub.
(8)hadii aad leedahay firaaqo ku dadaal sidii waqtigaasi aad ugu buuxin lahayd waxyaabo kale adigoo ka fogaanaya in qofkaas aad siiso fursad ay naftaada isugu mashquuliso.
(9)noqo qof furfuran, faraxsan iskuna kalsoon lana soo bax dabeecad waji furnaahso iyo bashaashnimo ah.
(10)isku day haday suurto gal kuu tahay in aad sameyso booqasho aad ku tageyso meel dhaadheer oo xusuus kugu reebi kara .
qasab ma aha meel aad gaari u raaceyso oo magaalada dhan ka baxsan oo aadan awoodin in ay tahay meeshaasi ee waxaaba dhici karta in ay jirto goob deegaankaaga ka yara baxsan oo aad cabaar u lugeyneyso oo aadan weligaa tegin.
qodobadaasi waxay kaa saacidi doonaan hadaad ku dhaqanto in qofkaas aan ku jecleyn adna jeceshahay naftaada ka Delete gareyso kana saarto xusuustaada , waxaad dareemeysaa maalinba maalinta ka dmabeysa in qofkaasi uusan kula sii yeelaneynin wax micno ah oo aadba ka maarmeyso iskana ilaabeyso.
horay buu abwaan soomaaliyeed u yiri:
Mahuraanka caashaqa Haday kula macnayn Waydo,
Marbaa samirku kugu waajibaa Mahadis keenaaye
Oo aad waxaad maaganayd Kaba macaashtaaye
Midaad muuqa Dahab moodid oo magacna keedii leh
qodobadaasi aan soo sheegay waa dariiqada ugu wanaagsan uguna fudud ee aad uga bixi karto siriqa jacayl ee laguu dhigay, aadna u noqon karto qof naftiisa jecel oo aan u ogolaaneyn in lagu kor socdo.
hadaba ka kac haatan hurdada isku diyaari sidii aad ku heli lahayd jacayl dhab ah, raacna talooyinkaasi hubaal waa kuwo ku anfacaya insha allah.